के साच्ची कै यती छ र ? | Pardesh ko Chautari Baata (परदेशकाे चाैतारी बाट)
के साच्ची कै यती छ र ?
नोभेम्बर 17, 2008 at 6:29 अपराह्न टिप्पणी छोड्नुहोस्	विश्वमा थुप्रै अद्भूत रोचक र अनौठा वस्तुहरू पाइन्छन् । यसमध्ये कुनै स्पष्टरूपमा देखिन्छन् भने कुनै किम्वदन्ती र अन्धविश्वासका रूपमा रहेका हुन्छन् । वास्तविक धरातलमै आइसकेका कतिपय वस्तुले सबैलाई चकित पारेको हुन्छ । कतिले आङै जिरिङ-जिरिङ पार्दै रोमाञ्च, कौतुहलता र जिज्ञासा समेत बढाउँदै विश्वमा कतिपय दुर्लभ वस्तुहरू रहस्यकै गर्भभित्र लुकिरहेका छन् । यस्तै रहस्यभित्र रहेको र हाम्रो देशमा मात्र पाइने अर्को कौतुहलको विषय हो- हिममानव अर्थात् यती । यतीको चर्चाले नेपाल अहिले आकर्षण र जिज्ञासाको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ । अहिले यो हिममानव यतीको खोजी, अध्ययन र अन्वेषणमा श्रम, शक्ति खर्च भइसकेको छ तर पनि यसको वास्तविक स्थिति र पहिचान अझै बाहिर आउन सकेको देखिँदैन ।
हालै जापानी पर्यटकहरूको एक टोलीले नेपालको हिमाली क्षेत्र तथा तिब्बती हिमाली भेगमा यतीको पाइला भेटेको दावी गरेका छन् । यो टोलीले मानवको जस्तो देखिने आठ इञ्च लामो पाइला फेला पारेको बताएका छन् । पाइला २० सेन्टिमिटरको छ र मान्छेको जस्तो देखिन्छ “यती प्रोजेक्ट जापानका नेता योसीतेरु ताकासाकीले भनेका छन् । सात हजार ६ सय एकसठ्ठी मीटर अग्लो धौलागिरी चौथो हिमालमा ४२ दिन बिताएर फर्केका उनले त्यहाँ विगतमा यती भएको सङ्केत फेला पारेको बताए ।
“म र मेरा टोलीका सदस्यहरू एक वर्षदेखि हिमालयमा आएका छौँ । हामीले भालु, मृग, ब्वाँसो र हिम चितुवाको पाइला चिन्न सक्छौँ, तर यो पाइला तिनीहरूको भन्दा भिन्न थियो ।” उनी भन्छन् – हामीले वास्तविक हो कि होइन भनेर निर्क्योल गरेका थिएनौँ तर स्थानीयवासीको सहयोग र पाइलाले हामी निश्चित भयौँ कि यतीकै पाइला हो भनेर । “सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दैर् यतीको खोजीमा हिँडेका ताकासाकीले हालै धौलागिरी चौथो हिमालको पदयात्राबाट फर्केपछि यी भनाई सावर्जनिक गरेका हुन् ।
हिममानवको रहस्य र रोमाञ्चको कथा विश्वमै चर्चित छ । हिममानव यती छ- छैन, हुन्छ-हुन्न भन्ने कुराहरू आ-आफ्नै ठाउँमा छन् । यस विषयमा आजसम्म थुप्रै लेखक, अन्वेषक र आरोहीहरूले खोज-अनुसन्धानका लागि धेरै कामहरू गरिसके पनि नतिजा निरासाजनक थियो ।
दशकौँदेखि सुरू गरिएको यसको खोजी कार्यमा असफलता मात्र हात लागेपछि जापानीहरूको वैज्ञानिक टोली निरन्तर यसैको पछि दगुरीरहेको देखिन्छ- यतीको बारेमा नयाँ तथ्य फेला पार्न । यो टोलीले सन् २००३ मा नै यात्रामा आउँदा थुप्रै संवेदनशील क्यामेराहरू यती रहने सम्भावित स्थलहरूमा सेट गरेको थियो । ‘यो छायाँ करीब २ सय मीटर टाढा थियो । त्यो मान्छेको जस्तै दुईवटा गोडाले हिँडिरहेको थियो र हेर्दा १ सय ५० वटा सेन्टिमिटर अग्लो थियो’ ताकासाकीको दावी छ । यसपटक यतीको तस्वीर उतार्न असफल भए पनि उनीहरूले लगातार यसको खोजी कार्य जारी राख्ने भएका छन् । ‘हामी जतिसक्दो चाँडो आउने छौँ र हामी त्यति बेलासम्म आइनै रहन्छौँ जतिबेलासम्म यतीलाई क्यामेरामा कैद गर्दैनौँ’ उनले बताए । त्यसो त योभन्दा पहिला नै १९९४ मा जापानका यी ताकासाकीले धौलागिरी हिमालको करिब ४६०० मिटर माथि बनेको एक गुफामा विशालकाय जनावरको पाइला देखेको दाबी गरेका थिए ।
नेपालको हिमालय क्षेत्रकै वरपर रहँदै अध्ययन अन्वेषण गरिआएको यो टोलीले दुर्लभ प्राणी यतीको वास्तविक परिचय जनमानसमा पत्ता लगाई छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । खोजी कार्यमा संलग्न यो टोलीसँग त्यस्ता शक्तिशाली क्यामेरा छन्, जो तस्वीरका साथसाथै आवाजलाई समेत कैद गर्न सक्छ । यसरी तस्वीर खिच्न आफैँ सक्रिय हुने थुप्रै क्यामेराहरू उक्त टोलीले सम्भावित क्षेत्रमा जडान गरेका छन् ।
यो रहस्यमय प्राणीलाई दे्खेको दावी गर्ने जीवन वैज्ञानिक र अन्य पर्वतारोहीहरू भए पनि अहिलेसम्म यसको कुनै निश्चित चित्र र भरपर्दो आकार-प्रकार प्रकट गर्न सकिएको छैन । यसलाई मात्र कल्पनामा वास गराइएको छ । कोही यसलाई आधा मानव र आधा जनावरको शरीर भएको प्राणी मान्छन् भने कोही हिउँ भालु, नीलो रङ्गको दुर्लभ प्राणी, याकको भोजन रूचाउने जीव र अझ कोही त मानिसलाई धोका दिएर छाँलिदै हिँड्ने, ओझेलमा पार्नसक्ने अत्यन्त चतुर र समझदार प्राणी जस्ता विभिन्न सङ्ज्ञाहरू यसले पाउने गरेको छ । ज-जसले, जे-जसरी व्याख्या वा प्रचार गरे पनि यसको वास्तविक स्थिति र व्यवहारका बारेमा कसैले ठोकुवाका साथ यथार्थ, सत्य विवरण दिन सकेको भेटिँदैन । यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको छ ।
नेपाल यतिका कारणले मात्र होइन अन्य थुप्रै यस्ता दुर्लभ प्राणी, वनस्पति, मठ-मन्दिर आदिका कारणले पनि विकसित र परिचित भइरहेको छ । यस्ता दुर्लभ विषयवस्तुहरूको महत्व र खोजी, अध्ययन, अन्वेषण गर्न आउने विभिन्न समूहहरूको कारणले गर्दा नेपाल एउटा दुर्लभ बस्तुहरुको अध्ययन केन्द्रको रूपमा विश्वमै परिचित र प्रतिष्ठित हुने मौकालाई हामीले राम्ररी उपयोग तथा संरक्षित गरिराख्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
आशा गरौँ योशितारो टोलीले यतीको बारेमा राम्ररी खोज, अनुसन्धान गरेर सत्य, तथ्य कुराहरू प्रकाशमा ल्याई यसलाई रहस्यको गर्भबाट निकाल्ने छ । यो प्राणी छैन, हुँदैन भने ती देखिएका चिजहरू, पदचिन्हहरू के रहेछन् तथ्य आउनु पर्‍यो । यसो हुन सकेमा यसका किम्वदन्ती र कथाहरू समाप्त भई यती यथार्थको धरातलमा आउने छ ।
-नगेन्द्रराज रेग्मी (साभार – गोरखापत्र )
Entry filed under: रोचक कुरा, japan, mysteries, Nepal. Tags: .	जगदिश दाइको अन्तमर्न	Thomas Beatie(Man) Pregnant Again ??	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...